C/kariin Xuseen Guuleed oo si aan caadi ahayn maanta loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/kariin Xuseen Guuleed oo si aan caadi ahayn maanta loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si aan caadi ahayn looga soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, kadib markii maalmihii ugu dambeysay uu xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka Hindiya.
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa dhawaan qaliin dhinaca wadnaha ah looga sameeyay dalka Hindiya, waxaana uu maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib markii ay xaaladiisa caafimaad soo hagaagtay.
Mas’uuliyiinta garoonka kusoo dhaweysay madaxweyne C/kariin ayaa waxaa ka mid ahaa Ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabeey, Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, Xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Waxaa islamarkiiba madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed loo galbiyay xafiiska ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid, iyadoona lagu wado inuu maanta ka qeyb galo xafladda xiritaanka shirka madasha wadatashiga qaran ee maalintii shanaad galay.
Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa filayaa in shirka madasha wadatashiga qaran lasoo gaba-gabeeyo, waxaana la soo saari doonnaa war-murtiyeed qeexaya qodobada la isku afgartey.